Farmaajo oo shaaciyay inuu hakiyay Awooda Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya - Jowhar somali news leader
Farmaajo oo shaaciyay inuu hakiyay Awooda Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya
By Mahad	 Last updated Sep 16, 2021
Qoraal goordhow ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha muddo xilledkiisu dhamaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in ra’iisul wasaaraha xukuumada federalka uu ka weecday waajibaadkii loo igmaday Xukuumadda ee ahaa ka shaqeynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka uu soo saaray Farmaajo
Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo;
Markuu arkay tallaabooyinka khilaafsan Dastuurka KMG ah ee uu qaaday Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble sida ku cad Qodobka 87aad, Xarfaha (b) iyo (c) iyo Qodobka 90aad, Xarfaha (b), (c) iyo (e);
Markuu ka weecday waajibaadkii loo igmaday Xukuumadda ee ahaa ka shaqeynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka sida ku caddayd khudbaddii uu Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka jeediyay Golaha Shacabka 1dii May 2021, Goluhuna uu tixgeliyay soojeedintaas;
Markuu arkay in Ra’iisul Wasaaraha uu qaadanayo tallaabooyin aan laga fiirsanin oo dalka u jiheyn kara qalaase siyaasadeed iyo mid amni;
Markuu arkay in Wasiirka Koowaad uu sameynayo isku day ku xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka Ciidamada Qalabka sida iyo awood si khaldan u isticmaalid hay’adaha qaarkood;
Farmaajo oo joojiyay heshiisyada,kala wareejinta, iibka iyo…
Wasiirka Amniga oo booqday taliska ciidanka booliska…
Markuu xaqiiqsaday in Ra’iisul Wasaaraha latashi iyo wada shaqayn la lahayn Madaxweynaha, isaga oo ku dhaqaaqay inuu soo saaro go’aanno ku keli ah oo aan waafaqsanayn shuruucda iyo Dastuurka dalka taas oo ay ka dhalatay xil-gudasho la’aan;
Maadaama Madaxweynuhu yahay Astaanta midnimada qaranka, Ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi’da asaasiga ah ee Dastuurka;
Madaxweynuhu wuxuu xeeriyay qodobadan;
1. Maadaama Wasiirka Koowaad ee XFS uu jabiyay Dastuurka KMG ah, waxaa la hakiyay awoodaha Wasiirka Koowaad iyo dhammaan warqadaha kasoo baxa, gaar ahaan xilkaqaadis ama xilmagacaabis, inta laga dhammeystirayo doorashooyinka dalka oo ay u xilsaaran yihiin Guddiyada Madaxabannaan ee magacaaban.
2. Inta lagu jiro xaaladdan, hay’adaha kala duwan ee dowladdu waxay sii wadayaan hawlaha ay shacabka ugu adeegayaan ee lagama maarmaanka u ah socodsiinta hawlaha xukuumadda, si waafaqsan Qodobka 102aad ee Dastuurka Kumeelgaarka ah oo si cad u qeexaya in Wasiir kasta uu isagu masuul ka yahay Howlaha Wasaaraddiisa, ayna tahay in lagu tixgeliyo, iyagoo aan ku dhaqaaqi karin xil ka qaadis iyo xil magacaabis inta laga dhammeystirayo doorashooyinka dalka.
3. Maadaama ay dhammeystirmeen dhismaha guddiyada doorashooyinka ee Heer Federal (FEIT) iyo kuwa heer Dowld Goboleed (SEIT), Xallinta Khilaafaadka, si buuxdana loogu heshiiyay habraacyada, miisaaniyadda, qorshaha amniga doorashada iyo dhammaan waxyaabihii ay ku xirnayd qabsoomidda doorasho waafaqsan heshiiskii 17ka Sebteembar 2020 iyo habraacyadii lagu xalliyay tabashooyinkii kasoo laabtay 27ka May 2021, lana guda galay doorashooyinka Labada Aqal.
Sidaas darteed, waxaa lagu dhiirrigelinayaa dhammaan hay’adaha ay khuseeyso hawlaha doorashooyinka inay dardargeliyaan si waafaqsan Jadwalka Doorashooyinka ee la faafiyay.
Mahad 3450 posts
Rooble oo faray Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi inay u soo gudbiyaan Liiska Musharaxiinta Aqalka Sare
Somali President suspends prime minister’s executive powers in increasing row
Ra’iisul Wasaare Rooble oo booqday Xarunta Dowlada Hoose ee Xamar
Could a technological solution save the planet from climate change?
hanad	 Oct 27, 2021
Iran agrees to restart nuclear deal talks before end of November
Macron greets ‘new journey’ as France returns looted…
Houses razed to make way for gold mining in the Democratic Republic of…
Soldier admits role in 1987 assassination of Burkina Faso…